12 cartoons on right to protest in Myanmar — မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်အခြေအနေ နှင့်ပတ်သက်သည့် သရုပ်ဖော်ကာတွန်း ၁၂ ခု – Free Expression Myanmar
Aug 04, 2020 by Coordinator	in Campaigns စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
ငြိမ်းစုစီဥပဒေသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် များစွာသော ဝေဖန်မှုများကြောင့် ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် ပျက်ကွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
Although the PAPP Law was amended in 2016 following significant criticism, it still fails to conform to international democratic standards. Cartoon: tree: “international standards”, person: “protest law amendment”.
ငြိမ်းစုစီဥပဒေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ရဲများသည် အသိပေးအကြောင်းကြားစာကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံလွှာဟု သတ်မှတ်နေပါသေးသည်။ ၇၂ % သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများက ရဲများသည် အသိပေးစာကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံလွှာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။
Although the PAPP Law was amended in 2016, most police still regard notification forms as an application for permission to protest. 72% of protesters believed that the police treated their notifications as applications for permission to protest. Cartoon: “Permission is no longer needed!”
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်လျှင် ရိုင်းစိုင်းမှု၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မပီသသော အပြုအမူများကို ပိုကြုံတွေ့နိုင်ချေများခဲ့ပါသည်။
Women protesters were more likely than men to have experienced rude and unprofessional behaviour when notifying the police.
၅၆% သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ၎င်းတို့၏ အသိပေးစာများကို ပြင်ဆင်ခိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ကြွေးကြော်သံ သို့မဟုတ် ဆန္ဒပြ ခေါင်းစည်းများ(၃၉%) ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာ နေရာ (၃၉%)၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် ပုံစံ(၂၂%) ကို ပြောင်းလဲရန် ရဲများ၏ တောင်းဆိုခြင်း ခံရသည်။
56% of protesters were asked to amend their notifications or be rejected. The police asked: 39% to change their slogans or placards; 39% to change the location of their protest; and 22% to change the form of their protest.
၄၃% သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ရုတ်တရက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့် ဥပဒေအတိုင်း မလိုက်နာနိုင်ခဲ့ကြပါ။ (ငြိမ်းစုစီဥပဒေသည် ရုတ်တရက်ဆန္ဒပြခြင်းကို တရားမဝင် သတ်မှတ်ထားသည်။) သို့မဟုတ် (၁-၂ ရက်) ကြိုတင်ကာ အာဏာပိုင်များကို ခွင့်တောင်းရန် အချိန်မလုံလောက်သောကြောင့် မလိုက်နာနိုင်ခဲ့ကြပါ။ ၇ % သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ စီမံသူများသည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် အာဏာပိုင်များကို အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်ကို လုံးဝမသိပါဟု ဖြေဆိုထားကြသည်။
43% of protesters were unable to abide by the law either because their protests were spontaneous (and the PAPP Law effectively makes spontaneous protests unlawful) or because there was not enough time to notify the authorities in advance (1-2 days). A sizeable 7% of protest organisers were not at all aware of the need to notify the authorities when holdingaprotest. Cartoon: “Where’s your permission?”
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများထဲမှ ၄၀ %သည် ပြင်းထန်သော လူစုခွဲထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် အချိုးအစား မမျှတစွာ အင်အားသုံး လူအုပ်ခွဲခံခဲ့ရသည်ကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် ဟု ဆိုသည်။
40% of protesters witnessed the police using what the protester regarded as disproportionately forceful crowd control measures against protesters.
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများထဲမှ ၅၇%သည် ရဲများက ၄င်းတို့၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ဆောင် ခွင့်မပြုခဲ့ကြဘဲ ရပ်တန့်ရန်နှင့် လူစုခွဲရန် ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲအားလုံးနီးပါးသည် အကြမ်းဖက်မှုများ မပါဝင်ခဲ့ပါ။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ၃၉ %က ၄င်းတို့ကို လူစုခွဲရန် ရဲများက အင်အားသုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ၅၀ %သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများက ၄င်းတို့သည် ရဲများထံမှ လူစုခွဲရန်နှင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုရပ်တန့်ရန်အတွက် ကြိုတင် သတိပေးချက် (သို့မဟုတ်) ရှင်းလင်းသော အကြောင်းပြချက်များကို လုံးဝ မရရှိခဲ့ကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့သည်။
57% of protesters said that the police did not allow them to complete their protest but instead were told to shut down and disperse. Almost all of the protests were non-violent. 39% of protesters said that the police used force to disperse the protesters. 50% of protesters said that they received absolutely no clear reason or warning prior to the police shutting down the protest and dispersing the protesters.
FEM ၏ အသေးစိတ်မေးမြန်းချက်များအရ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြီးနောက် သိမ်းဆည်းခံ အထိုင်သပိတ်စခန်းပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းသွားသောနေရာမှ ပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင် ပစ္စည်းအရေအတွက် ကွာဟမှုရှိခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ(၁၄%)က ဖြေကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
14% of protesters found missing items among their thing confiscated by the police during protests.
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ဆန္ဒပြပွဲပြီးနောက် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းခံခဲ့ရသည်။ ၄င်းတို့၏ ဖုန်းများ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် နည်းပညာဖြင့် ထောက်လှမ်းမှုများ လုပ်ခံခဲ့ရသည့် လက္ခဏာများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ၁၄%က ဆိုသည်။
Protesters face surveillance after protesting. 14% had identified signs that they were under electronic surveillance via their phones or online presence. Cartoon: “Hello? Hello?” (weak sound because somebody listening in)
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြီးနောက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့် ထောက်လှမ်းခံနေရကြောင်း ယုံကြည်ဖွယ် အကြောင်းပြချက်များစွာ ရှိခဲ့သည်ဟု ၆၂ % သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများက ဆိုခဲ့သည်။ ၄င်းတို့၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည်သူမည်ဝါမှန်းမသိသော လူများက စောင့်ကြည့်နေခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ယောင်ခံလိုက်မှု ရှိခြင်းကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဟု ၄၈% က အခိုင်အမာ ဆိုထားသည်။
62% of protesters had reason to believe that they had been placed under surveillance after protesting. 48% had identified unknown persons watching or following them in the street after the protest.
ဆန္ဒထုတ်ဖော်များသည် အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆစေရန် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့သော ယခင်ခေတ်ဟောင်းအာဏာရှင်များ၏ စနစ်များသည် ယနေ့ ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အလွန်ရှင်သန်အမြစ်တွယ်နေသေးသည်ကို ဤအစီရင်ခံစာက ပေါ်လွင်စွာ ဖော်ပြပေးနေပေသည်။
This report has demonstrated that the old authoritarian predisposition to view protests asathreat to public order is very much alive in today’s Myanmar. Cartoon: “Not protests!”
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အခန်း(၈)-နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကဏ္ဍ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
၃၅၄။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးဌာ ပြဌာန်းထားသည့်ဥပဒေများ နှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် အောက်ပါအခွင့်အရေးများကို လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည် –
၃၅၄(က)။ ။ မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့်။
၃၅၄(ခ)။ ။ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်။
Constitution Chapter VIII: Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizens of Myanmar Constitution 2008. Cartoon: arms: “national security” and “harmonious relations”.
၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ မှ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရသူ ၂၂၉ ဦးထိ ရှိခဲ့ပြီး ၄င်းတို့အနက် အယောက် ၅၀ ကို FEM က အသေးစိတ် မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာ၏ ရလဒ်များနှင့် ကိန်ဂဏန်းဖော်ပြချက်များကို အောက်ပါ လင့်(ခ်)တွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည် – ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်မပြု
229 protesters were criminally charged in Myanmar between October 2016 and January 2020. FEM interviewed over 50 of them and you can download these stats and all the results in our report “No Permission to Protest” >
Tagged with: Cartoons, Human rights defenders, Peaceful Assembly and Procession Procession Law, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Right to assembly